Cima iAkhawunti ye-Instagram, Sikuxelela ukuba uyenze njani! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Cima i-akhawunti ye-Instagram, sikuxelela indlela yokwenza ngayo!
NgoJanuwari 7, 2019 0 IiCententarios 865
Rhoqo umntu olapha kuphando ukunxulumene nababangqongileyo; eye yaba lula kakhulu kwaye yalula ngokufika Internet namawakawaka amaqonga akhoyo namhlanje ukuze afezekise injongo yokunxibelelana. Ngendlela, ukupapasha kuhlala kuqhuba unxibelelwano zenethiwekhi zokuncokola. Enye yezona zinto zibalulekileyo kuluntu lwe-Intanethi Instagram; kuba oku kuvumela nxibelelana ngendlela eyahlukileyo nesebenzayo. Kodwa nangona kunjalo kukho amaxesha apho kufuneka ucime i-akhawunti ye-Instagram.
Izigidi zabantu zenza iimpapasho zemihla ngemihla kweli qonga. Kodwa ayingabo bonke abasebenzisi abafumana iziphumo ezifanayo, okanye abafikeleli nje Inani labalandeli okanye izimvo abazifunayo. Ke ngoko, ukucima i-akhawunti ye-Instagram kungabonakala ngathi kukukhetha kwinxalenye ethile yabangekho intanethi Oko bendijonga.
Kufuneka kubekho umgca ocacileyo wokwahlula phakathi koshicilelo kunye nokwazi abantu kunye kunyanzelekile ukuba upapashe kude kube sesona senzo sibaluleke kakhulu sosuku. Xa usenza zonxibelelwano, ulungelelwano phakathi kwexesha elichithwe kwi-Instagram kunye Gcina imali kubudlelwane bobuso. Ewe, akunampilo ukutywa yi Umsebenzi zentlalo kwesicelo.
Ngamanye amaxesha, kuyimfuneko ukuthatha ikhefu kwiintanethi zentlalo. Esi sizathu sokuba i-Instagram ayikho Ngaphandle kwale nto kutheni kusungulwe indlela yokusebenza; apho kungekho mva susa Iakhawunti ye-Instagram Ukwazi oko ngokucima iakhawunti yonke Ukuthandwa kwaye "abalandeli" baya kunyamalala umphelo. Ke sisigqibo kufuneka uthathe ngononophelo kwaye ngaphandle kokubuya. Kwi- ukusetyenziswa kwenethiwekhi, kubalulekile ukwazi ukuba xa uyicimile iakhawunti, awuyi kuba nakho ukusebenzisa umsebenzisi wakho wakudala ukwenza i entsha, kunye nokongeza kwiakhawunti eyahlukileyo.
Yintoni ekufuneka uyenze ukucima i-akhawunti ye-Instagram?
Ukuba sele uthathe isigqibo sokucima i-akhawunti ye-Instagram, kuya kufuneka Landela uthotho lwe amanyathelo, usazi ukuba ngokusetyenziswa kwayo ayiyongxaki inokwenzeka. Yenzelwe ntoni kuya kufuneka ungene kwi iphepha elisemthethweni ukusuka kwi-Instagram; ukungena kwakho kanye umsebenzisi password, fikelela kwidilesi ekhethekileyo yewebhu ukucima i-akhawunti ye-Instagram.
Emva kokuba uvula iphepha elithile ukucima i-akhawunti ye-Instagram, ixesha liya kuza apho kufuneka uphendule umbuzo, kutheni ufuna ukucima iakhawunti yakho? Ngale nto kufuneka Cofa kwimenyu eyehlayo ebekwe kwicala lasekunene lombuzo. Ukukhetha okukhetho olukhethiweyo; nokuba yinto ephazamisayo okanye ukusetyenziswa okuphantsi Njengomgaqo-nkqubo wabo wabucala, phakathi kwabanye. Nangona kunjalo, ukuba akukho nto inokwenza kwakho Isizathu, ungasebenzisa "enye into" njengempendulo efanelekileyo.
Kuya kufuneka uyazi ukuba inyathelo elidlulileyo liyimfuneko enyanzelekileyo ukuba ukwazi ukucima i-akhawunti INstagram ye isigxina kwaye asinakujikwa. Emva koko, njengomlinganiso we ukhuseleko kufuneka uphinde ufake ipassword yakho kwaye ke uqinisekise isigqibo sakho sokucima iakhawunti ye-Instagram.
Bona indlela yandisa abalandeli be-Instagram
Emva kwayo yonke le nkqubo, kuyakufuneka ucofe ileta "Cima i-akhawunti ngokusisigxina", Kwaye uMsitho ugqityiwe! Cima iakhawunti ndiphumeleleNstagram Uyicimile iakhawunti yakho, akusayi kubakho mkhondo wayo kwaye iphinde kuwe Ndiyakhumbula, iya kubakho ngokusisigxina.
Amaxesha amaninzi, ubunzima obukhulu bufuna amanyathelo athabatha inxaxheba; njengokucima Iakhawunti ye-Instagram. Nangona benokuba ngandlel 'ithile abagqithayo, ngaphambi a Ukunyanzelwa kokusetyenziswa kothungelwano, enye umlinganiso wobungakanani busebenza kakhulu. Yenza ezi ntlobo zezigqibo, Kuxhomekeke kumntu ngamnye, ayihlali ilula. Ukuba unomdla kwi Shicilela okanye unxibelelane a ngokusebenzisa i-null okanye iphantse ibe lilize, akukho mqobo mkhulu wokuvala i-akhawunti.
Kodwa, ngokuchasene noko, umntu okuthethwa ngaye uxhomekeke ku intanethi, cima iakhawunti I-Instagram inokuba sisigqibo esinzima nesikrakra. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba kungenxa yoko le nto ayilunganga, ngokuchaseneyo, inokubanceda abantu abanje ukuba likhoboka.
Intlalo yoluntu ihlala ibeka imigangatho ethile izimo zengqondo kunye nokuziphatha que Ziya kutshintsha imini zibe yimini yomntu. Kuba ngale ndlela, into ekufuneka yenziwe kwaye ngokuchaseneyo, yile zixhomekeke kwizinto eziyinyani ngokutshintsha kwe impembelelo yentlaloibonakalisiwe rhoqo ngaphambi kolu hlobo lokunxibelelana njenge-Instagram.
Kubalulekile ukukhumbula ukuba kwanaxa iinethiwekhi zokunxibelelana zenza lula ukuntsokotha kwe inkqubo yonxibelelwano, ngayo iqonga elilula nelilula lokufikelela. Ndiyakwazi ukufikelela kwinqanaba lokunxibelelana kwabantu. Kungenxa yoko le nto ukucima i-akhawunti ye-Instagram kuyinto Isixhobo esisebenzayo kuye nabani na ofuna ukususa ngokusisigxina naluphi na umkhondo Ukusetyenziswa kweakhawunti; engenakuphila kwakhona naphantsi kwazo naziphi na iimeko kwixa elizayo kwikamva
Siyanceda nawe vimba umntu kwi-Instagram
1 Intloko yesiqhelo
2 Yintoni ekufuneka uyenze ukucima i-akhawunti ye-Instagram?
2.2 Yenza isigqibo
NgoJanuwari 6, 2019
Vimba iakhawunti ye-Instagram, fumana ngoku!
NgoJanuwari 8, 2019
Sebenzisa i-Instagram Shopping, inyathelo ngenyathelo!